ပထမတစ်ယောက်ကို အရမ်းတွေ ချစ်နေခဲ့ရင် – Shinyoon
ပထမတစ်ယောက်ကို အရမ်းတွေ ချစ်နေခဲ့ရင်
December 16, 2020 by Shin Yoon
ကျွန်မက ဒုတိယလူ …. ကျွန်မ မှာ အရမ်းချစ်ရတဲ့လူရှိတယ် သူလည်းကျွန်မကို အရမ်းချစ်တယ်နောကျတဈယောကျကိုလည်းသူကအရမ်းချစ်တယ်တဲ့ကျွန်မ ကဒုတိယလူပါ တကယ်လို့ ပထမတစ်ယောက်ကို အရမ်းတွေ ချစ်နေခဲ့ရင် ကျွန်မကိုလဲ အရမ်းချစ်ပြခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးတွေ မလုပ်ခဲ့သင့်ဘူးလေ
အချစ်ရေးမှာ ဒုတိယလူတွေက ကံကောင်းတယ်တဲ့ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မ ကံမကောင်းခဲ့ဘူး ပထမလူကို အရမ်းချစ်ရဲ့သားနဲ့ ဘာလိုကျွန်မကိုချစ်ခဲ့သေးတာလဲစဉ်းစားမရခဲ့ဘူးဘယ်သူ့ကို ရွေးချယ်မလဲမေးတော့မသိဘူးတဲ့နှစ်ယောက်လုံး ကို အရမ်းခ်စ္တယ် တဲ့ ဒီစကားတွေကြားခဲ့တုန်းက ကျွန်မ အံ့သြခဲ့မိတယ် တစ်ဖက်သားကို ငဲ့ညှာတတ်ဖို့မတွေးပဲ သူ့အတွက်ပဲ တွေးနေတဲ့ အတ္တတွေကို ကျွန်မ သိပ်ကြောက်သွားခဲ့တယ်
ရယ်ရတယ်နော်ငါးစိမ်းလည်းလိုချင် ငါးကင်လဲဝါးချင်နဲ့ အခုတော့ လှည့်ထွက်ခဲ့ပါပြီ ကျွန်မ တန်ဖိုးတွေအဲ့လောက်မမဲ့ဘူးလေ ။ မျက်ရည်တွေနဲ့ ထွက်မသွားပါနဲ့လို့ တောင်းပန်ရလောက်တဲ့အထိ ကျွန်မ မာနတွေ မမဲ့ချင်ဘူး ။ ကျွန်မဟာ တစ်စုံတစ်ယောက်အတွက် အရွေးချယ်ခံ မဖြစ်ချင်ဘူးလေ ။
ကျွန်မက သူ့အတွက် ဒုတိယလူတဲ့ … နှစ်ဦးလုံးကို လက်မလွှတ်ပဲ နှစ်ယောက်စလုံးစီက မေတ္တာတွေ ခံယူချင်နေတဲ့ သူ့ကိုတော့ အံ့သြမိတယ် ။ ပထမလူကိုသာ သိပ်ချစ်ခဲ့ရင် ကျွန်မကို ဒုတိယအနေနဲ့ ချစ်တယ် မပြောခဲ့သင့်ဘူးလေ ။
ကြၽန္မက ဒုတိယလူ …. ကြၽန္မ မွာ အရမ္းခ်စ္ရတဲ့လူ႐ွိတယ္ သူလည္းကြၽန္မကို အရမ္းခ်စ္တယ္ေနာက်တစ်​ေယာက်ကိုလည္းသူကအရမ္းခ်စ္တယ္တဲ့ကြၽန္မ ကဒုတိယလူပါ တကယ္လို႔ ပထမတစ္ေယာက္ကို အရမ္းေတြ ခ်စ္ေနခဲ့ရင္ ကြၽန္မကိုလဲ အရမ္းခ်စ္ျပခဲ့တဲ့ပုံစံမ်ိဳးေတြ မလုပ္ခဲ့သင့္ဘူးေလ
အခ်စ္ေရးမွာ ဒုတိယလူေတြက ကံေကာင္းတယ္တဲ့ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္မ ကံမေကာင္းခဲ့ဘူး ပထမလူကို အရမ္းခ်စ္ရဲ႕သားနဲ႔ ဘာလိုကြ်န္မကိုခ်စ္ခဲ့ေသးတာလဲစၪ္းစားမရခဲ့ဘူးဘယ္သူ့ကို ေရြးခ်ယ္မလဲေမးေတာ့မသိဘူးတဲ့ႏွစ္​ေယာက္လံုး ကို အရမ္းခ္စၱယ္ တဲ့ ဒီစကားေတြၾကားခဲ့တုန္းက ကြၽန္မ အံ့ၾသခဲ့မိတယ္ တစ္ဖက္သားကို ငဲ့ညႇာတတ္ဖို႔မေတြးပဲ သူ႔အတြက္ပဲ ေတြးေနတဲ့ အတၱေတြကို ကြၽန္မ သိပ္ေၾကာက္သြားခဲ့တယ္
ရယ္ရတယ္ေနာ္ငါးစိမ္းလၫ္းလိုခ်င္ ငါးကင္လဲ၀ါးခ်င္နဲ့ အခုေတာ့ လွည့္ထြက္ခဲ့ပါၿပီ ကြၽန္မ တန္ဖိုးေတြအဲ့ေလာက္မမဲ့ဘူးေလ ။ မ်က္ရည္ေတြနဲ႔ ထြက္မသြားပါနဲ႔လို႔ ေတာင္းပန္ရေလာက္တဲ့အထိ ကြၽန္မ မာနေတြ မမဲ့ခ်င္ဘူး ။ ကြၽန္မဟာ တစ္စုံတစ္ေယာက္အတြက္ အေ႐ြးခ်ယ္ခံ မျဖစ္ခ်င္ဘူးေလ ။
ကြၽန္မက သူ႔အတြက္ ဒုတိယလူတဲ့ … ႏွစ္ဦးလုံးကို လက္မလႊတ္ပဲ ႏွစ္ေယာက္စလုံးစီက ေမတၱာေတြ ခံယူခ်င္ေနတဲ့ သူ႔ကိုေတာ့ အံ့ၾသမိတယ္ ။ ပထမလူကိုသာ သိပ္ခ်စ္ခဲ့ရင္ ကြၽန္မကို ဒုတိယအေနနဲ႔ ခ်စ္တယ္ မေျပာခဲ့သင့္ဘူးေလ ။
သူစူးတာက နောက်မှာပါ … ခုလောလောဆယ်တော့ ကိုယ်ပဲ ရူးရတယ်
တစ်စုံတစ်ယောက် အဆင်ပြေဖို့ဆိုပြီး ကိုယ်အဆင်​မပြေခဲ့တာတွေ ဘယ်သူမှ မသိဘူး
ပစ်ထားတဲ့သူက ပစ်ထားမှတော့ နေနိုင်အောင် နေရတာပေါ့
ဝေးသွားကြပြီဆိုမှတော့ ဝေးသွားကြပြီပေ့ါ ဘာအကြောင်းပြချက်မှ မလိုတော့ပါဘူး
အမှတ်တရတွေက ကျွန်မကို သတ်နေတယ်
ရှင်မရှိလို့လဲ ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး အဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့ ….
© 2021 Shinyoon • Built with GeneratePress